Sirdoonka Israel iyo Uganda oo gacanta ku dhigay Nin Ganacsade ahaa – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Koox ka socotay Sirdoonka labadaasi waddan waxay bishan July 7-dii qaadeen Hawlgal wadajir ah, kaasi oo ay ku qabteen Muwaadin u dhashay dalka Lubnaan oo xilligaasi ka soo degay Garoonka Diyaraadaha Caalamiga ee Entebbe ee dalka Uganda.
Faahfaahinta Hawlgalkaasi iyo qabashadda ninkaasi ayaa wax yar laga ogaa, balse, Shabakadda Wararka ee Kampala Post ayaa sheegtay inay heleen warar Sirdoon oo laga argagaxo, iyadoo ay markii ugu horreysay Hay’addaha Ammaanka ogaadeen qorshe Argagixiso.
Muwaadinka Lubnaan ee haatan baaritaanka lagu hayo ayaa waxaa markii ugu horreysay la shaaciyey in lagu magacaabo Xuseen Maxamuud Yaasine, kaasi oo lagu tuhunsan yahay inuu ahaa Sirdoon ka tirsan Ururka Xisbullaahi Lubnaan,
Ninkaasi waxaa uu ku noolaa, kana shaqeysanayey dalka Uganda tan iyo sannadkii 2010-kii.
Xubno ka socday Sidoonka Gudaha Israel ee MOSSAD ayaana la sheegay inay Ninkaasi kala soo degeen Diyaarad duullimaadkeedu ahaa dalka Lubnaan, balse ku sii hakan lahayd Garoonka magaalladda Addis Abeba ee dalka Ethiopia.
Qabashadiisa ayaana ku soo beegantay saacado kadib, markii uu dib ugu soo laabtay Garoonka Entebbe, isagoo ka yimid caasimadda dalka Tanzania ee Darasalaam.
Qabashadda Muwaadinka Lubnaan ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen Sirdoonka Uganda, CIA-da Maraykanka iyo MOSSAD-ka Israel, waxaana la tilmaamaay inay muddo dhowr bilood ah ku raad-joogeen Ninkaasi lala xiriirinayo Ururka Xisbullaahi Lubnaan.
Ilo-wareed ayaa sheegaya inay Dowladaha Maraykanka iyo Isreal ka dalbadeen Dowladda Uganda in si degdeg ah loogu soo oogo dacwad, balse, ma kala cadda inay Maamulayaasha Uganda go’aansan doonaan inay dacwad ku soo oogaan Ninkaasi oo haatan ku jira gacanta Hay’addaha Ammaanka Uganda.
Sida laga soo xigtay ilo sirdoonka Uganda oo la hadlay Shabakadda Wararka Kampala Post ayaa sheegay in Xuseen Maxamuud Yaasine ka tirsan yahay Ururka Xisbullaahi, isla markaana uu tilmaamay in isaga iyo xubno kale loo soo diray inay so oogaadaan bar-tilmaameedyadda ay Maraykanka iyo Israel ku leeyihiin gudaha dalka Uganda iyo dalalka Gobalka, waa sida ay qortay Kampala Post.
Ilo-wareedyo kale ayaa sheegaya inuu Xuseen Maxamuud Yaasine laga soo xigtay in ugu yaraan 100 Muwaadiin Lubnaaniyiin ah oo ku nool gudaha dalka Uganda oo ay suurto-gal tahay inay u shaqeeyaan Ururka Xisbullaahi Lubnaan.
Qaar ka mid ah dadka uu far-muuqay ayaa waxay ka shaqeeyaan Shirkadda bixisa Adeegga Isgaarsiinta Uganda ee lagu magacaabo Africell.
Dhinaca kale, Qunsulliyadda uu dalka Lubnaan ku leeyahay dalka Uganda waxay qoraal Diplomaasiyadeed u dirtay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Uganda, maalmo kadib markii Muwaadinka u dhashay dalka Lubnaan lagu xiray dalkaasi.
Qunsulliyadda waxay ka ashtakootay xarigga Muwaadinkooda, waxayna ka digtay inuu falkaasi saamayn ku yeelan doono dadka Reer Lubnaan ee ku nool dalkaasi inaysan ku dhiiran kariin inay maalgashi ka samaystaan gudaha dalka Uganda.
Si kastaba ha ahaatee, Ururka Xisbullaahi ayaa ah Urur hubeysan oo ka dhisan dalka Lubnaan oo isbahaysi la ah dalka Iiraan, waxayna marar badan Ciiddanka Israel dagaal kula galeen dhulka xuduudka ee ay labada dal wadaagaan.
Dowladda Somalia oo ka hadashay Qaraxii lagu Eedeeyay Qatar ee ka dhacay Boosaaso